Phoenix, AZ • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Heart of Arizona. Safidio ny maodelin'ny slide Nuru avy amin'ireo matihanina manosotra vatana an'arivony.
Phoenix no renivohitra sy tanàna be mponina indrindra ao Arizona, misy olona 1,660,272 (hatramin'ny taona 2018). Io ihany koa no tanàna fahadimy misy mponina indrindra any Etazonia, ary ny renivohi-panjakana tokana misy mponina mihoatra ny iray tapitrisa mponina. Safidio ny Nuru slide modely avy amin'ny an'arivony manosotra ny vatana matihanina amin'ny RubPage.com.
Jereo daholo (18)